Riyad Mahrez oo hogaaminaya shaxda kooxdii ugu fiiceneyd Toddobaadkan Premier League-ga … “Xiddigee kaga jira kooxdaada?” – Gool FM
(England) 23 Sebt 2019. Shabakada “WhoScored” ayaa daabacday shaxda kooxdii ugu fiiceneyd kulamadii 6-aad ee laga ciyaaray horyaalka Premier League Isbuucan, ee aan ku daawanay xasuuqii ay Manchester City u geysatay kulankii Watford.
Waxaa shaxda kooxdan hogaaminaya Riyad Mahrez, kaddib bandhigii fiicnaa uu ka sameeyay kulankii Watford.
Manchester City ayaa xasuuq ba’an u geysatay kooxda Watford, kaddib markii ay ku garaacday 8-0, kulan ka tirsanaa 6-aad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan, kaasoo ka dhacay Etihad Stadium.
Ma jiro ciyaaryahan ka tirsan hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee Liverpool oo liiska shaxdan ku soo baxay, inkastoo ay ku badiyeen 2-1 kulankii adkaa ay la ciyaareen naadiga Chelsea.
Manchester City ayaa ku guuleysatay in shaxda kooxdan ay ku yeelato 7 kursi, afarta kursi kale ee hartay waxaa loo kala qeybiyay kooxaha Sheffield United, Leicester City, West Ham iyo Burnley.
Haddaba shaxda kooxdii ugu fiicneyd kulamadii 6-aad ee laga ciyaaray horyaalka Premier League Isbuucan ayaa ah sidan:
Goolhaayaha: Ederson (Manchester City)
Daafacyada: Ricardo Pereira (Leicester), Nicolás Otamendi (Manchester City), Jack O’Connell (Sheffield), Aaron Cresswell (West Ham)
Khadka dhexe: Kevin De Bruyne (Manchester City), David Silva (Manchester City), Riyad Mahrez (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City)
Weerarka: Sergio Agüero (Manchester City), Chris Wood (Burnley).